ဝက်အချိုချက်၊ ငပိကြော် – Thet Nandar
ဒီနေ့ ချက်တဲ့ ၀က်အချိုချက် နှင့် ငပိကြော် ပါ။
ငပိကြော်ကို ကြော် ပီး ပီးချင်း … ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ ကြက်သွန်နီကြော်များနှင့် အတူ ထမင်းနဲ့ နှယ်စားရတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။
ဒီတခါ ၀ယ်စားသော အရိုးပါသော ၀က်သားတုံးများ …
သူ့ကို roast အနေနဲ့ ချက်စားရင် ပိုကောင်းသလို .. ..
ကင်စားရင်လည်း စားလို့ကောင်းတဲ့ အသားပိုင်း ……
အရိုးပါတဲ့ ၀က်သားတုံးမို့ စွန်တန်နှင့် အတူ အရည်သောက် ချဉ်၊ စပ် ချက်စားရင် ကောင်းမလား … …
ပျားရည် သုပ်ပီး ကင်စားရင် ကောင်းမလား …
aluminum foil ပတ်ပီး roast ချက်စားရင် ကောင်းမလား …
သမီးက ချိုချိုလေး စားချင်တယ်ဆိုလို့ …. ပဲငံပြာရည် အနောက်နဲ့ နှယ်ပီး ချက်ထားသော ၀က် အချိုချက် …
ငပိကြော်ကို ထမင်းနဲ့ နှယ်ပီး …
အခွံပါး သံပုရာသီးကို စားပွဲပေါ် လက်နှစ်ဖက် နဲ့ ဖိပီး လိမ့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါဆို သံပုရာသီးက လှီးလိုက်တဲ့ အခါ အရည်ပိုရွှမ်းတယ်။ သံပုရာသီး စိတ်တွေကို သေးသေးလေးတွေ စိတ်ပီး ငပိကြော် နှယ်ထားတဲ့ ထမင်းထဲ မြုပ်ပီး သံပုရာသီးကို အခွံပါ ၀ါးစားပါတယ်။ ( သွားတွေ ကြိမ်းပေါ့ )
*** ချက်၊ စားနည်း ***
၀က်သားကို ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ပဲငံပြာရည် အကြည်၊ အနောက်တို့ နဲ့ နှယ်ပီးနောက် ချက်မယ့်အိုးမှာ ဆီကို ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက်ထည့်ပီး … ဆီပူလာပီဆိုတာနဲ့ သကြား လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက်ထည့်မွှေပီး နာနတ်ပွင့် တပွင့်ထည့်။ ပီးမှ ဓါးပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဂျင်း တို့ ကို ထည့်ပီး ခဏလောက် ဆီသတ်ပီးမှ နှပ်ထားတဲ့ ၀က်သားထည့်မွှေထားတာပါ။
၀က်သားများ လိပ်တက်လာပီဆိုမှ ရေကို အသားတုံးမြုပ်ရုံ ထည့်ပီး အသားတုံး တ၀က် နီးပါးလောက် ရေခမ်းပီဆိုရင် ရေကို အသားတုံး မြုပ်ရုံ ၃ ကြိမ်လောက် ပြန်ဖြည့်ပီး ချက်ထားတဲ့ ၀က်အချိုနှပ်ဟင်း။ ကလေးများကတော့ အရမ်းကြိုက်။
ငပိ နှင့် ချက်စားသော ဟင်းလျှာများ
February 23, 2012 Thet Nandar
2 thoughts on “၀က်အချိုချက်၊ ငပိကြော်”
စာဖတ်နေရင်း ဗိုက်ထဲကတောင် အသံမြည်သွားသေးတယ်..
ချော ( အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် ) …
ချော ရေ … အိမ်လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော် ….:)